Infrared Thermometer Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Kuyera thermometer > Infrared Thermometer
Infrared thermometer inosanganisira yeavo system, Photodetector, chiratidzo amplifier, chiratidzo chekugadzirisa, kuratidza kubuda uye zvimwe zvikamu. Iyo Optical system inoshandura tarisa infrared radiation simba mumunda wayo wekutarisa, uye saizi yemunda wekutarisirwa inotsanangurwa nezvakarongeka nzvimbo dze thermometer nenzvimbo dzadzo. Iyo infrared thermometer simba inotarisa pane Photodetector uye inoshandurwa kuita inoenderana magetsi chiratidzo. Iyo infrared thermometer chiratidzo inopfuura nepamhepo uye chiratidzo chechisimba kutenderera, uye inoshandurwa kuve mutengo wekupisa weiyo yakayerwa mushure mekugadziriswa zvichienderana ne algorithm uye chinangwa kusimbisa kwechiridzwa. Uye zvakare, mamiriro ezvakatipoteredza ekutarisirwa uye iyo thermometer, yakadai sekudziya, mamiriro ekunze, kusvibiswa uye kupindira, nezvimwe, zvinofanirawo kutariswa zvinokanganisa index yekuita uye nzira dzekugadzirisa.
Muzvisikwa, zvinhu zvese zvine tembiricha yakakwirira kupfuura zero zvachose zvinoramba zvichibudisira infrared radiation simba kune yakakomberedza nzvimbo. Kukura kweiyo infrared radiation simba rechinhu uye kugovera kwayo zvichienderana neiyo wavelength yakanyatsoenderana nekushisa kwayo kwepasi. Naizvozvo, iyo infrared thermometer inogona kupimisa kwayo kupisa kwemamiriro epasi nekuyera iyo infrared simba rakavhenekerwa nechinhu icho pachako, icho chiri chinangwa chiri icho infrared radiation tembiricha yekuyera yakavakirwa.
Infrared thermometer performance zviratidzo: tembiricha huwandu, nzvimbo nzvimbo
Infrared thermometer basa: tsanangura chaizvo kutonhora kwaro kwepasi
Infrared thermometer spcication:
Infrared thermometer inoshanda voltage: DC 3V
Infrared thermometer Bettery Model: AAA x 2
Michini lämpömittari bettery upenyu: alkaline yakaoma bhatiri nokuda kumativi 20000 kuyerwa
Infrared thermometer yekuyera nguva: Inenge 2 yechipiri
Infrared thermometer yekuyera huwandu:
Nzvimbo yemabvi: 32.0â „ƒ - 42.9â„ ƒï¼ˆ89.6 ° F - 109.2 ° F)
Mhando yezvinhu: 0.0â „ƒ - 93.0â„ ƒ (32.0 ° F -199.4 ° F)
Infrared thermometer usahihi (marabhoritari): ± 0.2â „ƒï¼ˆ ± 0,4 ° F)
Infrared thermometer memory: 32 tembiricha kuverenga
Infrared thermometer yakadzika-bhatiri yambiro: chiratidzo chakadzika-bhatiri chinoratidzwa kana magetsi emagetsi akaderera pane 2,5 V ± 0.1V
Infrared thermometer otomatiki simba-bvisa: iyo thermometer inongodzimisa kana isiri kushandiswa mu8 ± 1 masekondi
Infrared thermometer ekunze zviyero (mm): 150 * 42 * 41 MM
Infrared thermometer kurema (g): pasina mabhatiriï¼ˆ65Gï¼ ‰
Infrared thermometer inoshanda nharaunda:
Humidiy: 15% - 95% RH, isiri - kudzikisira
Kudzvinyirira Atmospheric: 86 - 106 kPa
Infrared thermometer Inotakura ruzivo:
Kurema kwewebhu: 6.25KG
Huremu hwese: 11KG
Imwe bhokisi: 100PCS
Saizi imwe yebhokisi saizi: 160 * 66 * 45CM
Saizi yekodhi: 65 * 33.5 * 23.5CM
Bare yesimbi kurema (isina bhatiri): 62.5G
Infrared thermometer inoumbwa neye optical system, photoelectric detector, chiratidzo amplifier, chiratidzo kugadzirisa, kuratidza kubuda uye zvichingodaro. Iyo Optical system inoshandura tarisa infrared radiation simba mumunda wayo wekutarisa, uye saizi yemunda wekutarisirwa inotsanangurwa nezvakarongeka nzvimbo dze thermometer nenzvimbo dzadzo. Iyo infrared simba inotarisa pane Photodetector uye inoshandurwa kuita inoenderana magetsi chiratidzo. Iyo chiratidzo inopfuura nepamhepo uye chiratidzo chechitenderera, uye inoshandurwa kuve mutengo wekupisa weiyo yakayerwa mushure mekugadziriswa sekuenderana ne algorithm uye chinangwa kusimbisa chinhu. Uye zvakare, mamiriro ezvakatipoteredza ekutarisirwa uye iyo thermometer, yakadai sekudziya, mamiriro ekunze, kusvibiswa uye kupindira, nezvimwe, zvinofanirawo kutariswa zvinokanganisa index yekuita uye nzira dzekugadzirisa.
Hot Tags: Infrared Thermometer, Vagadziri, Vagadziri, Wholesale, Fekitori, Tenga, China, Yakagadzirwa muChina, Mutengo, Mutengo weChinyorwa, Quotation, CE, FDA